တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အီးယူ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဆင့် မဟာဗျူဟာမြောက်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိသည် ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) ၏ နိုင်ငံခြားရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် Josep Borrell နှင့်အတူ ၁၁ ကြိမ်မြောက် အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဆင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ဆွေးနွေးပွဲအား စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်၌ ပူးတွဲသဘာပတိပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။နှစ်ဖက်ကူးလူးဖလှယ်ဆက်ဆံမှုများအား အပြန်အလှန်လေးစားမှုကို အခြေခံထားသင့်ကြောင်း၊ မတူကွဲပြားမှုများကို ဖယ်ရှားပြီး ဘုံမြေပြင်ရှာဖွေခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပဋိပက္ခကိုလျှော့ချခြင်း၊ ကုလသမဂ္ဂပဋိဉာဉ်နှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေအပေါ်အခြေခံထားသော နိုင်ငံတကာအမိန့်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် COVID-19 ရောဂါနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့ ဘုံစိန်ခေါ်မှုများကို ပူးတွဲကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အီးယူတို့က ယုံကြည်ကြောင်း ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။
အီးယူကလည်း အခါသမယများစွာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကြိုဆိုခဲ့ကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်းနှင့် “စစ်အေးခေတ်သစ်” ၏ မည်သည့်ပုံစံကိုမဆို လုပ်ဆောင်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ ယင်းအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံက ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဝမ်က ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အီးယူကြား ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပိုမိုရှိခဲ့ကြောင်း၊ သဘောတူညီချက်များစွာလည်း ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းမှာ နားလည်မှုမြှင့်တင်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် မညီမျှမှုများကိုလျှော့ချခြင်းအတွက် အထောက်အကူပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“ဒီလို အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရှိန်အဟုန်ကို ပေါင်းစည်းကာ နိုင်ငံရေး အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု မြှင့်တင်၍ မတူညီမှုများကို သင့်တင်လျောက်ပတ်စွာ စီမံခန့်ခွဲပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အဓိကအင်အားနှစ်ခုအဖြစ် ကူညီထောက်ပံ့သွားသင့်ကြောင်း ဝမ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော ဆက်ဆံရေးသည် အီးယူ၏ အရေးပါသော အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ အီးယူနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် နီးကပ်၍ ချောမွေ့သော ဆက်သွယ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း Borrell က ပြောခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်ကြား အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဆင့် ဖလှယ်မှုများ နောက်ထပ်ကဏ္ဍသစ်အတွက် ပြင်ဆင်ရန် အီးယူအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်က အဆိုပြုထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဆိုပြုချက်အား အီးယူက ကြိုဆိုကြောင်း၊ ယင်းမှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထူရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အီးယူအနေဖြင့် ပြည်ပတွင် ကျောက်မီးသွေးသုံးစွမ်းအင်စီမံကိန်းသစ်များ တည်ဆောက်မှု ရပ်တန့်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကတိပြုမှုကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ COVID-19 ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ဇီဝမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုများတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ခိုင်မာစွာ ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း Borrell က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
#China, #EU, #WangYi, #Dialogue #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #တရုတ်, #အီးယူ, #ဝမ်ရိ, #ဆင်ဟွာ
BEIJING, Sept. 28 (Xinhua) — Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi co-chaired the 11th round of high-level strategic dialogue between China and the European Union (EU) with Josep Borrell, the EU’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, via video link on Tuesday.
The EU has said on many occasions that it welcomes China’s development, has no intention of engaging in institutional confrontation and will not engage in any form of “new Cold War.” China appreciates that, Wang added.
“We should consolidate this positive momentum, enhance political mutual trust, properly manage differences and contribute as two major forces to addressing global challenges,” Wang said.
The EU welcomes the Global Development Initiative proposed by Chinese leader, which will play an important role in global economic recovery and poverty eradication. The EU also highly appreciates China’s pledge to stop building new coal-fired power projects overseas. The EU is ready to continue to strengthen cooperation with China on fighting COVID-19, climate change and biodiversity conservation, Borrell said. Enditem
Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi attendsapress conference on China’s foreign policy and foreign relations via video link on the sidelines of the fourth session of the 13th National People’s Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 7, 2021. (Xinhua/Chen Yehua)